Warshadda Detroit Jeep ayaa wajaheysa shaqo ka fadhiisin kumeel gaar ah oo ku saabsan qashin jabinta
Stellantis NV waxay qorsheyneysaa inay si ku meel gaar ah shaqada uga joojiso shaqaalaha warshada Jeep ee Detroit inta lagu guda jiro Abriil iyo Maajo sababo la xiriira maqaayadaha yar yar ee loo yaqaan 'semiconductor chips', ayay shirkaddu xaqiijisay.
Stellantis wuxuu gooyn doonaa laba shaqaale oo ka shaqeeya warshadeeda Jefferson North ee Detroit muddo seddex todobaad ah laga bilaabo Abriil 26, ka dibna dib u wac oo dib u dhig shaqaalihii seddexaad laga bilaabo Maajo 17 illaa usbuuca May 31, sida ku cad jadwalka ay heshay Bloomberg News. Warshadda dhinaceeda bari ee Detroit waxay sida caadiga ah shaqeysaa laba isbeddel oo ay la socdaan saddex shaqaale oo shaqeeya lix maalmood usbuucii si ay u sii wadaan 20 saacadood maalintii.
"Stellantis wuxuu sii wadaa inuu si dhow ula shaqeeyo alaab-qeybiyeyaashayada si loo yareeyo saameynta wax-soo-saar ee ay keeneen arrimaha silsiladaha kala duwan ee soo food saara warshadeena," afhayeenka shirkadda Jodi Tinson ayaa ku yiri hadal ay soo saartay. Sababtoo ah yaraanta microchip-ka adduunka oo aan horay loo arag, Jefferson North wuxuu hagaajin doonaa jadwalka wax soo saarkeeda illaa dhammaadka M
Warshadda, oo loo yaqaan JNAP, waxaa ka shaqeeya qiyaastii 4,800 shaqaale saacadle ah waxayna sameysaa Jeep Grand Cherokee, nooca Jeep-ka ee iibka ugu sarreeya sanadkii la soo dhaafay, iyo Dodge Durango SUV. Nooc dib-u-habeyn ah oo loo yaqaan 'Grand Cherokee' ayaa loo qorsheeyay inuu bilaabo soo saarista bisha Ogosto, sida uu sheegayo cilmibaare AutoForecast Solutions.
Stellantis, oo laga sameeyay midowga Fiat Chrysler Automobiles NV iyo PSA Group, waxay isku dayeysaa inay ilaaliso soosaarida baabuurta sumadda leh ee Jeep iyo Ram. yaraanta semiconductor-ka adduunka aafada warshadaha baabuurta.
Shirkaddu waxay horey ushaqeysay nus ka mid ah 10keeda dhir ee Waqooyiga Ameerika bishan gudaheeda yaraanta awgeed. Waxay sidoo kale la tacaaleysa kor u qaadista kiisaska coronavirus - soosaarka warshadeeda Sterling Heights, taas oo ka dhigaysa nooca cusub, qiimaha qaaliga ah ee qaada Ram 1500,waxaa caqabad ku noqday qayb ahaan maqnaanshaha la xiriira COVID, Bloomberg ayaa soo warisay usbuucii hore.
Michigan wuxuu noqday meesha ugu xun ee viruska wadanka mareykanka madaama noocyada faafa ee faafa ay sii faafayaan, halka ka gaabinta talaalka iyo daalka faafa ay wiiqeen dadaaladii lagu joojinayay viruska.